4:44 pm, शुक्रबार, चैत ६, २०७७
काठमाडौं । नेपालमा अहिले १९ लाखदेखि नयाँ कार किन्न सकिन्छ । विशेषत इन्ट्री लेवल ह्याचव्याक कारहरु कम मूल्यमा किन्न पाइने मोडल हुन् । यस्ता गाडीमा रहेका केहि अत्यावश्यक फिचरहरु नहेरी इन्ट्री लेवल कारहरु खरिद गर्दापछि पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले बजारमा मारुती सुजुकी, हुन्डाई, टाटा, डाट्सन, रेनो लगायतका ब्राण्डले कम मूल्यका कारहरु विक्री गर्दै आएका छन् । यस्तोमा तपाई गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने केहि फिचरमा ध्यान पुर्याउदा राम्रो गाडी खरिद गर्ने अवशर मिल्न सक्छ ।
आधुनिक गाडी सुरक्षा फिचर र लग्जरी फिचरले भरिपूर्ण हुने भएपनि कम मूल्यका गाडीमा धेरै फिचर पाउन सकिदैन । त्यसैले कम्तीमा निम्न ५ फिचर भएका गाडी तपाईले छनोट गर्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई सन्तुष्टी प्रदान गर्न सक्छ ।
१. दुई एयरव्यागः विशेषत सुरक्षा फिचरको रुपमा गाडीमा प्रदान हुने एयरव्याग खोज्न आवश्यक फिचर हो । पछिल्ला दिनमा कम्तीमा एउटा एयरव्याग अनिर्वाय भएपनि अगाडि यात्रा गर्ने चालक र यात्रुको लागि दुई एयरव्याग हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । परिवारका सदस्य यात्रा गरिने कारमा एउटा मात्रै एयरव्याग भएको गाडीलाई राम्रो मान्न सकिदैन ।
अकस्मात हुने दुर्घटनामा एयरव्यागले यात्रुलाई हुनसक्ने चोट–पटकबाट बचाउने काम गर्छ । अहिलेका आधुनिक कारमा ९ वटासम्म एयरव्याग दिएको पाइन्छ । त्यसैले गाडी किन्दा यसमा रहने एयरव्यागको संख्यामा ध्यान दिनु पर्छ ।
२. पावर विन्डोः अहिलेपनि कम मूल्यका गाडीमा सबै झ्यालमा अटोमेटिक बटमको सहायताले सिसा बन्द गर्नसकिदै । सुन्दा सामान्य रहेपनि पावर विन्डो निकै महत्वपूर्ण फिचर हो । त्यसैले आफ्नो सहजताको लागि पावर विन्डो उपलब्ध रहेको गाडी छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
३. एबीएस र इबीडीः एबीएस र इबीडी पनि गाडीको सुरक्षासँग जोडिएको फिचर हो । यसले गाडीको ब्रेकिङ सिस्टमलाई सहज र सुरक्षीत बनाउँछ । अहिले अधिकांश गाडीमा एबीएस र इबीडी प्रयोग भएको पाइन्छ । यद्यपी इन्ट्री लेभल कार किन्नेले यो कुरालाई बुझेर किन्दा राम्रो हुन्छ ।
४. इलेक्ट्रीक स्टेरिङको साथ अडियो सिस्टमः अहिले इलेक्ट्रीक स्टेरिङ अधिकांश कारमा पाउन सकिन्छ । तर, अडियो कन्ट्रोल वटम भने सबै कारको स्टेरिङमा हुँदैन । त्यसैले तपाईले कार छनोट गर्दा अडियो कन्ट्रोल बटम सहितको स्टेरिङ भएको कार छनोट गर्नुभयो भने गाडी चलाइरहेको समयमा तपाईको ध्यान अनेत्र मोड्नु पर्दैन ।
५. इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टमः आजकल इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम नभएको कारको ड्यासबोर्ड निकै फिक्का लाग्ने भएको छ । कति कम्पनीले आफ्नो इन्ट्री लेवल कारमा इन्व्यूल्ट इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम नभएपनि पछि थप गरेर दिन सुरु गरेका छन् । पछिल्लो दशकमा निकै चर्चित बनेको इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम अहिले ग्राहकले धेरै खोज्ने फिचर समेत भएको छ ।